Otu esi etinye Steam na Debian 11 Bullseye - LinuxCapable
September 28, 2021 by Jọshụa James
Otu esi ewebata onye ahịa Steam
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta otu esi etinye Steam na Debian 11 Bullseye desktọpụ gị.
Site na ndabara, Debian 11 anaghị eso Steam, yabụ ị ga-eji aka tinye ngwa Steam, ị ga-ebudata nrụnye ahụ. .deb faịlụ dị na Steam's ebe nchekwa wee mee ya site na iji akara ahịrị iwu gị.
Site na nrụnye zuru oke site na usoro nrụnye ọ bụla, ị nwere ike ịgba Steam n'ụzọ dị iche iche.
Nke mbụ, ka ị nọ na ọdụ gị, ịnwere ike iji iwu na-esonụ iji malite Steam:
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ Uzuoku & nye iwu n'azụ ka ịtọhapụ ọdụ ụgbọ ala:
Agbanyeghị, nke a abụghị ihe bara uru, ma ị ga-eji ụzọ a na desktọpụ gị mepee ụzọ ahụ: Ihe omume> Gosi Ngwa> Steam. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
Na iji oge mbụ, ị ga-achọpụta na Steam ga-emepe windo ọnụ ọhụrụ na-akpaghị aka na-agwa gị na ọ kwesịrị ịwụnye ngwugwu ndị ọzọ.
Tinye paswọọdụ gị ma ọ bụrụ na kpaliri gị, mgbe ahụ, a ga-akpali gị ka itinye ọtụtụ ndepụta ndabere.
Mara, a ga-akpali gị ka ịpịa igodo weghachi “ Tinye igodo. "
Na-esote, Steam ga-ebudata ma melite onwe ya na-akpaghị aka.
Dabere na ngwaike na ịntanetị gị, nrụnye kwesịrị ịrụcha nke ọma n'oge adịghị anya. Ozugbo emechara, ihuenyo nbanye Steam ga-ekele gị.
Ọzọ, banye na akaụntụ Steam gị ma ọ bụ mepụta otu; ị ga-abanye na onye ahịa Steam dị ka n'okpuru:
Ekele, ị rụnyela onye ahịa Steam nke ọma na Debian 11 Bullseye.
Ị mụtala ịwụnye ngwa Steam na nwa afọ na desktọpụ Debian gị. Site ebe a, ị nwere ike debanye aha maka akaụntụ efu wee malite ịchọta egwuregwu efu ma ọ bụ akwụ ụgwọ. Ọbá akwụkwọ Steam buru ibu, yana iji Linux na-achịkọta uzuoku, ọ bụ oge tupu enwere ọtụtụ nhọrọ maka egwuregwu na Linux dịka enwere na Windows.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Steam Mail igodo
Otu esi etinye phpBB na LEMP (Nginx, MariaDB, na PHP) na Rocky Linux 8
November 16, 2021 8: 35 am
ebudatara m ya ugbua mana ee, uzuoku m na-enwu na mberede na enweghị m ike ịhụ ihe ọ bụla
November 16, 2021 10: 43 am
N'ozuzu nke ahụ bụ ahụhụ na-adọrọ mmasị, anwalekwara m ya na nrụnye Debian 11 ọhụrụ nke dị ọhụrụ ma na-arụ ọrụ nke ọma.
Ị rụnyere Debian 11 ọhụrụ ma ọ bụ kwalitere ya na iri?
Kernel omenala ma ọ bụ gburugburu desktọpụ ọ bụla ma ọ bụ onye njikwa ngosi ka mma?
N'ozuzu, enwere m ike imelite nke a ma tinye flatpak, nke a bụ ihe ọzọ dị mma ma e jiri ya tụnyere snap na ngwugwu ya ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ime ya ka ọ rụọ ọrụ otu a.